Tovolahy iray 18 taona no tra-tehaky ny fokonolona teny amin’ny faritra 67Ha mahakasika io tranga io. Nentina tany amin’ny kaomisarian’ny boriborintany fahafito na CSP7 67Ha ny alahady hariva teo, tamin’ny 8ora alina noho ny resaka famakiana mpivarokena izy. Roalahy no tazan’ny olona ka ny iray izay efa mpiasa teo aloha, mahalala tsara ny hidin’ny tsena. Namaha ny trano fivarotana ilay efa za-draharaha ka niditra niaraka tamin’ny namany fa hamoaka hena. Rehefa andeha hivoaka iny no nianjera ny varavaran’ilay tranombarotra, ka taitra izy ireo ary nandositra avy hatrany ka nifanenjehan’ny fokonolona teny an-toerana ka tratra ny iray, nentina avy hatrany teny amin’ny polisy tao amin’ny CSP7 Ha. Ilay namany efa mpiasa tao amin’Ilay fivarotan-kena no tafatsoaka.